OIT- Filoha Rajoelina sy ny minisitra Ramampy Gisele: vita sonia ny fifanarahana iraisam-pirenena ho an’ny asa | NewsMada
Nanao sonia fifanarahana iraisam-pirenena enina momba ny tontolon’ny asa tany Geneve -Soisa ny filoha Rajoelina, notronin’ny minisitry ny Asa, Ramampy Gisèle sy ireo mpiara-miasa aminy eo anivon’ny minisitera, omaly.
Nivoitra ao anatin’izany ny momba ireo mpiasa mifindra monina, ny fifandraisan’ny asa eo anivon’ny asam-panjakana, ny fifampiraharahana miaraka, ny momba ireo masoivoho tsy miankina misahana ny asa, ny asa an-terivozona ary koa ireo mpanampy ao an-trano. “Napetrakay ho fanamby ato anatin’ny 10 taona ny hanafoanana tanteraka ny asa an-terivozona , ny fanandevozana maoderina, ny fanararaotana samihafa eo amin’ny tontolon’ny asa, ny endrika fampiasana ny ankizy”, hoy ny filoha Rajoelina tamin’ny anjara lahateniny amin’izao fanamarihana ny faha-100 taon’ny fikambanana iraisam-pirenena (OIT) izao. Notsiahivin’ny filoha Rajoelina fa manohana ny fandraisana andraikitry ity sampandraharaha ity i Madagasikara ho amin’ny fametrahana ny tontolon’ny asa manome vahana ny maha olona, ny fanajana ny zo fototra sy ny tsy fanilihana na koa ny fitantanana mitovy ny mpiasa eo anivon’ny asa.
Mikaro-bahaolana hatrany eo amin’ny tontolon’ny asa
Nanteriny fa nampiakarin’ny fanjakana tarihiny ho 19% ny karama farany ambany eto amintsika mba hanohanana sy ho fanampiana azy ireo. Manampy izany ny vinan’ny filoha ho amin’ny fandaharanasam-pirenena momba ny fandraharahana toy ny “Fihariana”. “Natao hampirisihina sy hankaherezana ireo tanora io, handraisany an-tanana ny hoaviny ho fampandrosoana ny firenena. Eo koa anefa ny fampihenana ny tahan’ny tanora tsy anasa”, hoy izy. Nanao antso avo amin’ny mpikambana eo anivon’ny OIT koa ny filoha mba hametraka mazava ny paikady miaraka manoloana ny asa fanandevozana miseho amin’ny endriny maoderina amin’izao fotoana izao sy ireo endrika fanararaotana samihafa eo amin’ny asa. Tsiahivina fa any an-toerana koa ny delegasiona avy amin’ny minisiteran’ny Asa, miezaka mikaro-bahaolana hatrany eo amin’ny tontolon’ny asa sy ny asam-panjakana.